Isithandathu seentsingiselo zeKhadi leWands Tarot | Ukufundwa kweTarot - Iintsingiselo Zekhadi Letarot
Iintsingiselo eziNtandathu zeWands Tarot Card
Isithandathu seWands Tarot Uluhlu lwesiqulatho
Amathandathu amaWands aPhezulu
Amathandathu amaWands abuyisiwe
Ukubonakaliswa kwamanani kwiZithandathu zeeWands
Bask ngomzuzu wakho wozuko. Lixesha lokuba uthathe indawo esembindini!
UJupiter uthathe indawo yokuhlala kuyo Leo , Ukwazisa umhlaba wonke ukuba usikelelwe ngamagunya kwiindawo eziphakamileyo kakhulu.
Wonke umntu uyavuma ukuba ufeze izinto ezinkulu. Ke qhubeka ubalise ibali lakho lixesha lama-27.
Abantu bamamele ngenyameko, kwaye bathabatha amanqaku. Ubakhuthazile!
I-Kabbalists ibiza amakhadi amathandathu e-Wands e-Lord of Victory , Kwaye uloyiso lwakho lwangaphandle nangaphandle.
Njengomkhweli okhwele isithsaba, wakhe phezu komfutho onamandla we I-Ace yeeWands . Abasebenzi obaphetheyo bathweswe ngesithsaba se-laurel, uphawu loloyiso.
Qaphela ukuba abasebenzi kunye ne-wreath kwi-Six of Wands benza uphawu lwealchemical yetyuwa, okuthetha ukuba ucocekile engqondweni nasemzimbeni. Uphumelele ngokwenza into elungileyo.
virgo indoda kunye nomhlaza umfazi ukuhambelana
Intloko yakho ithweswe ngelaurel ngokunjalo. Abantu bayakuthanda hayi nje ngezenzo zakho kodwa kwanomntu onguye.
Unxibe umlilo o-orenji obomvu kunye nelanga, ihempe yakho emthubi ityhila ukuba khange uwasebenzise amandla akho ngokudubula okude. Mthubi unxulunyaniswa nomoya. Kusekho ioksijini eninzi yokugcina loo mililo ivutha.
Ukubamba iintambo zehashe lakho kwelinye icala, ulikhokele lidlule kwi-canter yakho enamandla, unciphise ngokwaneleyo ukuba ubonwe kwaye uqondwe.
KwiTarot, amahashe ziimpawu yentshukumo namandla. Ihashe kula maWands amathandathu mhlophe ukubonisa iinjongo zakho ezimsulwa. Inkqubo ye- luhlaza ukugoba amalaphu kubonisa ubuchule, ukuchuma, kunye nothando.
Abasebenzi abahlanu abagcinwe ngamadoda emhlabeni kwi-Six of Wands babhekisa kwi Amahlanu eWands , Ithetha ukuba eli khadi lithembisa uloyiso emva komzabalazo. Abasebenzi kwisandla somkhweli benza inani lamaRoma 'VII' kunye nabasebenzi abathathu ngasekunene. Oku kubonisa ukuba unokujamelana nayo nayiphi na imiceli mngeni enokuza ngokuzithemba.
Ethe tye ezintandathu zeeWands Tarot Card
Impumelelo engaqhelekanga ifuna imibhiyozo engaqhelekanga!
Ke musa ukuba neentloni ngayo. Wenze into entle. Kulungile ukuba ufumana ukwamkelwa okukufaneleyo. Ungumntu ophantsi emhlabeni, ke awuyivumeli nayiphi na le nto ukuba iye entlokweni yakho.
Kwaye, unobulumko ngokwaneleyo ukuba ungaphumli kwimivuzo yakho. Uyazi ukuba eli linyathelo nje elinye kuhambo lwakho ebomini. Ngelixa wonwabele lo mzuzu wozuko, ujonge nohambo oluzayo.
Ewe, kujongeka njengendawo ekumaWands amathandathu iklabhu yamakhwenkwe. Kodwa lo mkhweli uphumeleleyo ubuya ekhaya evela emfazweni ngokulula unokuba ngumfazi.
Ngapha koko, uSgt omncinci. U-Leigh Ann Hester ubonakalisile ubukroti obumzekelo xa esindisa ubomi bamanye amajoni e-Iraq xa i-Humvee yabo yayikhubazekile yibhombu esecaleni kwendlela. Ubukroti bakhe bamenza umfazi wokuqala ukufumana iSilver Star ukusukela ngeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
Amathandathu eeWands akabonisi kuphela ukuba ufumana ukwamkelwa okukufaneleyo, ikwacebisa ukuba izenzo zakho zikhuthaze abanye.
Likhadi elilunge ngakumbi kufundo lwe-tarot yomsebenzi. Abaphathi bakho kudala beyibukele inkqubela yakho, kwaye bayayithanda into abayibonayo. Ukunyusa okanye ibhonasi obukade uyinqwenela kunokuba kukufikelela.
Kwikhadi le-tarot lokufunda ngothando, ikhadi lesithandathu leWands tarot licebisa ukuba ubuhlobo obude obude buya kutshintsha buze kubudlelwane bothando. Ngoba kutheni? Akukho namnye kuni oqhotyoshelweyo, kwaye nifunde ukuthembana ngokuhamba kwexesha. Akukho mfuneko yokoyika. Kuyinyani, ubuhlobo bakho buyatshintsha, kodwa kuyatyetyiswa, akusongelwa.
Isithandathu seWands sikukhuthaza ukuba ungavumeli uloyiko okanye iimvakalelo zokuziva unetyala zimi endleleni yempumelelo yakho. Ihashe elimhlophe libonisa ukuba indlela yakho yokuhambela phambili ayikhe ime ngokungqubana nexabiso lakho.
Ngamanye amaxesha, ikhadi lesithandathu leWands tarot livakalisa iindaba ezilungileyo ezivela kwimithombo yaseburhulumenteni okanye kurhulumente. Qhubeka ujonga ibhokisi yakho yeposi.
Iintsingiselo eziNtandathu zeWands eziGuquliweyo zeKhadi leTarot
Xa kubuyiselwa umva, ikhadi lesithandathu leWands tarot liyalumkisa ukuba kungangoko kuselithuba ukubhiyozela.
Yiya ngaphaya kwayo yonke into ngekama entle yamazinyo elinye ixesha. Ngaba uphosa into?
Ingqondo yakho yokuba nethemba inokuba ilahlekile kuba isekwe kwiimvakalelo zodwa. Kubalulekile ukuba nesimo sengqondo esihle. Isimo esibi yindlela eqinisekileyo yomlilo yentlekele. Kodwa xa ujonga ukuzibophelela okukhulu, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba iinyani zilungile njengesimo sakho sengqondo.
Ukuba amanani awakhangeleki kakuhle, akunandaba ukuba unethemba kangakanani. Inyani iya kukufumana ekugqibeleni.
Ngaba uyabathemba abantu abafanelekileyo? Thatha umzi wendlu yakho eneemvakalelo. Khangela iimvakalelo ezixineneyo ezinokuthintela isigqibo sakho.
Xa uziva ngathi ungaphezulu kwehlabathi, usengozini ngakumbi kubantu abangenawo umdla wakho engqondweni-ngakumbi xa unxunguphele.
Ewe, ukuma kwindawo ebonakalayo kuyonwabisa. Kodwa khumbula ukuba impumelelo yakho inokutsala umona omninzi. Abanye basenokungabinakho ukuthwala ingcinga yokuba wenza ngcono kunabo, kwaye baya kuya kubude obukhulu ukufumana amathambo egumbini lakho.
Ke ngumbono olungileyo ukuba uzilumkele abo bangathanda ukukubona usiwa lubabalo. Ubulumko yinto elungileyo.
Gcina ukhumbula nangona kunjalo, ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kokulumkisa kunye noloyiko. Kwakhona, hlala usekelwe kwiinyani kwaye uphephe ukudlala iparanoid 'qhagamshela amachaphaza' imidlalo. Unokuza nomfanekiso ongalunganga.
Ikhadi elibuyisiweyo leWands elibuye umva lisenokucebisa ukuba impumelelo yeprojekthi obusebenza kuyo ayinakuba nkulu njengokuba ubunethemba. Awunakuphela ukuba ube ziitshathi zokurhola inkwenkwezi, kodwa umculo wakho uya kuhlawula amatyala. Yimpumelelo leyo, nayo.
Mhlawumbi umzuzu wakho wozuko ulingana kuphela nomzekeliso wemizuzu elishumi elinesihlanu yodumo. Zonke izinto ezilungileyo zize zidlule. Ngubani othi abazukubuya?
Isithandathu seWands Tarot Card Imbalelwano yeMetaphysical:
Isithandathu seKhadi leWands kunye neTarot Numerology
I-Kabbalistically, i-sixes inxulunyaniswa namandla aqaqambileyo elanga. Ngokwesiko Ukubhula, 6 Ihambelana neVenus kunye namandla ovuyo. Xa la mandla edityaniswa kwi Isuti yeeWands , impumelelo yakho kunye nolonwabo luyabakhuthaza abanye.
I-pisces indoda kunye ne-pisces woman bathanda ukuhambelana
I-taurus mfazi kunye nendoda yanamhlanje ngesondo
ukuhambelana kwendoda nendoda kunye nentombi